Episode - Choose Your Story 11.50.0+gn Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 11.50.0+gn လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Episode - Choose Your Story
Episode - Choose Your Story ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းသင်သည်မေတ္တာ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, စွန့်စားမှုများနှင့်ဒရာမာဇာတ်ကားနှင့်သင်၏ပုံပြင်များ LIVE ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးဇာတ်ကောင်ဖြစ်လျှင်ကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်းသင်အရေးကြောင်းရွေးချယ်မှုလုပ်ဘယ်မှာ 100,000 ကျော်ဆုတ်ထားတာပုံပြင်များနှင့်အတူဖွင့်ကြောင်းပြုကြပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖတ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, ဇာတ်လမ်းတွဲသင်ကသင်၏ကံကြမ္မာကိုရှေးခယျြဘယ်မှာအပြန်အလှန်ပုံပြင်များ၏ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်တစ်ဖန်တီးသူဖြစ်လာနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရေးပါ!
•သင့်ကိုယ်ပွား Customize နှင့်သင့်မတ်မတ်ဒီဇိုင်း
•သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့် - သူတို့ပြိုင်ဘက်သို့မဟုတ်ချစ်သူများဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
•မတူကွဲပြားကမ္ဘာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွငျးမှာအာရုံစှဲ, options အဆုံးမဲ့များမှာ!
မသာသင့်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုနိုင်, သငျသညျမြားကိုလညျးသင့်ကိုယ်ပိုင်ရေးလိုက်နိုငျပါသညျ! ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖတ်သန်းပေါင်းများစွာစာစုဆောငျး, ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်အပြန်အလှန်ပုံပြင်များရေးရန်နှင့်ထုတ်ဝေ။
THE K သည် * အက်စ်အက်စ်စာရင်းကဒီမှာပါ! Kentwood အကယ်ဒမီကျော်တာမှည့်သောဖြစ်ပါတယ်။ Kentwood ရဲ့အပူဆုံးဆိုရင် single 10 နမ်းခြင်းဖြင့်အာဏာရကျောင်းများတွင်သင်တို့၏စုံလင်သော Streak Continue!
အချစ်ဘဝ NEW YORK CITY ၌သင်တို့၏ရိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းပါ!
သင်၏မေတ္တာဘဝတက်အပူအသင့်ဖြစ်ပြီလား? ပရောပ, အစီအစဉ်နှင့်သင်အပေါငျးတို့သရိုက်ချက်များကိုပဌနာနှင့်သင့်အိပ်မက်တွေကိုပွညျ့စုံလာစေရှိရာကဒီက NYC sizzling အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာရန်သင့်လမ်း party!
ကလေးစီမံကိန်း။ သငျသညျ Riverside မှအမြင့်ရဲ့များအတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အသစ်များကို * HOT * ကျောင်းသားနှင့်အတူတွဲနေတဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဇောက်ထိုးလှည့်ဖြစ်ပါတယ် "ကလေး Project မှ။ " ဒီဒရာမာအသက်ရှူသင်စွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
လှပသောလိမ်ညာမှုလေးများ။ သင်နှင့်အခြားမုသာဝါဒီသူမကသင်ငွေညှစ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် "တစ်ဦးက" ချွတ်နိုင်တော်မူမည်လော အားလုံးကတီဗီစီးရီးပေါ်မှာဤမူလလှည့်ကွက်ထဲမှာပုံရသည်အဘယျသို့မဟုတျပါဘူး။
positive Princess ။ ဒါကြောင့်သင်တို့သည်လျှို့ဝှက်တစ်ဦးက Princess နေထွက်လှည့်သောအခြိနျကာလကိုသတိမရကြသလော ကောင်းပြီ, အဆင်သင့်, gurl get: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအရည်အချင်းပြည့်မီ Royal ... သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့သငျ့ကလေးရှိသည်ဖို့တန်းစီနေကြသောကြောင့်, ?!
Demi LOVATO: ကျာ TO သို့ PATH ။ သင်တဦးတည်းနှင့်သာစူပါစတား Demi Lovato နှင့်အတူသွားရောက်မယ့်အခွင့်အလမ်းအနိုင်ရသည့်အခါ, ချစ်ခြင်း, သူငယ်ချင်းများနှင့်ပရိတ်သတ်များဟန်ချက်ညီရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုစမျးသပျသညျ! သငျသညျနောကျဆုံးအဆငျ့မှလုပ်လိမ့်မည်နည်း
သင်ဟာအမြဲ ACA-နောက်ခံအတွင်းအပူဆုံး acapella အုပ်စုတစ်စုသည် Bella ပူးပေါင်းအိပ်မက်မက်ပါတယ်™ Deep ထရီဘယ်လ် IN စေးအကောငျးဆုံး! ယခုတွင်သင်သည် Barden University ကနေကထွန်းလင်းရန်သင့်အချိန်ပါပဲ။ သငျသညျအားလုံးသစ်နှစ်မျိုးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအကျိုးစီးပွားအကြားကိုက်ခံရစဉ်အခါ, riff-ချွတ်အတွက်စာရင်းစစ်ဟန်ချက်ညီနှင့်သင့်အသံခုတ်ပယ်ဖေါ်ပြခြင်းနိုင်တော်မူမည်လော
အခွားသော၎င်း၏ Goodies ပါဝင်သည်:
• clueless: ကျောင်းဖွင့်အထဲက
•ဒါဟာ bra အတူ Started
•အ Dolan အမွှာပူးဘို့ကျဆင်းလာ
PLUS ... ပိုပြီးသစ်ကိုပုံပြင်များအပတ်တိုင်း!
Pretty Little မုသာကိုသုံးသောအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်ဒြပ်စင်© & ™ Warner Bros. Entertainment က Inc ကို (s18)
TM အလိုအလျောက် & © 2018 Paramount Pictures ရုပ်ရှင်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
™ & © 2018 က Universal Studios က
သတိပြုပါ: အပိုင်းကိုသင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံများအတွက်ဂိမ်းအတွင်းပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်လက်လှမ်းဖြစ်ချင်ကြဘူးလျှင်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။
Episode - Choose Your Story အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Episode - Choose Your Story အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Episode - Choose Your Story အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Episode - Choose Your Story အား အခ်က္ျပပါ
premiumapp စတိုး 2.21k 2.99M
Episode - Choose Your Story ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Episode - Choose Your Story အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 11.50.0+gn
ထုတ်လုပ်သူ Episode Interactive
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://episode-app.tumblr.com/post/66744877212/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 98:03:D2:9C:1B:E5:2C:5F:D3:6D:6F:58:2A:DC:8F:9B:7B:9E:D3:5A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Episode Interactive
အဖွဲ့အစည်း (O): Pocket Gems Inc
Episode - Choose Your Story APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ